Ibubata ụgbọ ala si Australia gaa UK | Importgbọ M Mbubata
You na-achọ ibubata ụgbọ ala Ọstrelia gị na United Kingdom?
Anyị nwere ike ijikwa usoro dum ị na-ebubata ụgbọ ala gị si Australia, gụnyere mbupụ, mbupu, nnabata kọstọm, ụgbọ ala UK, nyocha nnabata na ndebanye aha DVLA. Anyị na-ejikwa usoro dum, na-azọpụta gị oge, nsogbu na ụgwọ a na-atụghị anya ya.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ anyị iji bubata ụgbọ gị si Australia?
Mbupu (Oke osimiri)
Maka ụgbọ ala si Australia, anyị nwere ike ijikwa mbupu na nnọchite gị. Nke a gụnyere ịhazi usoro ụgbọ gị ga-ebu n’oké osimiri, na-ebubata ya na n’ibutu ya.
Usoro mkpochapụ kọstọm na akwụkwọ achọrọ iji kpochapụ ụgbọ ala gị bụ nke anyị onwe anyị na-ahụ maka ijide n'aka na ụgbọ ala gị enweghị ụgwọ nchekwa ọ bụla ọzọ.
Lọjistik (frezọ okporo ụzọ)
N’oge obula nke ibubata ugbo ala anyi, anyi no iji mee ndokwa ihe niile anyi choro n’ime anyi iji hu na odighi igbu oge.
A na-edozi ụgbọ ahụ ma nwalee anyị maka nnabata na United Kingdom. Emechara nyocha niile dị mkpa na saịtị anyị nwere ụzọ nyocha nke IVA.
Ozugbo ụgbọ ala Australia kwadoro, anyị na-elekọta akwụkwọ niile achọrọ iji debanye aha ụgbọ ala gị na United Kingdom na enwere ike ịnakọta ma ọ bụ nyefee ụgbọala ahụ.
Site na afọ nke ibubata ụgbọ ala si Australia gaa UK, anyị ejirila nlezianya ahọrọ ndị ọkachamara ịbugharị ụgbọ ala ndị na-arụ ọrụ site na ọdụ ụgbọ mmiri niile dị na Australia iji jikwa ụgbọ ala ndị ahịa anyị.
Anyị na-enye nchịkọta ekele n'ime oke obodo nke Brisbane, Sydney, Melbourne na Perth mana enwere ike itinye ntinye akwụkwọ iji nakọta ụgbọ ala gị site na mpaghara ọzọ na Australia na arịrịọ gị.
Anyị na-ebugharị ụgbọ ala ndị ahụ site na iji igbe akọrọ, nke a na-enye gị ohere irite uru site na mbelata mbubata ịbubata ụgbọ gị na UK n'ihi ịkekọrịta ọnụ ahịa nke akpa ahụ na ụgbọala ndị ọzọ anyị na-ebubata na ndị ahịa.
Mbupu akpa bụ ụzọ dị nchebe ma dịkwa nchebe iji bubata ụgbọ ala gị na UK ma na-abụkarị ọnụ ahịa kacha mma. Ọ bụrụ na-amasị gị akpa raara onwe ya nye 20ft maka ụgbọ ala gị, biko jụọ, ka anyị na-enyekwa nke a maka ndị ahịa anyị.
Ego ole ka ị ga-akwụ iji bubata ụgbọ ala Australia na UK?
Mgbe ịbubata ụgbọala si Australia, e nwere ụzọ anọ dị iche iche isi kpochapụ omenala na UK, dabere na ụgbọ ala ahụ, afọ na ọnọdụ gị:
Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ ala arụpụtara na mpụga EU, a ga-ana gị ụgwọ 20% VAT na ọrụ 10%.
N'aka nke ọzọ, Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ ala arụpụtara n'ime EU, ị ga-akwụrịrị ụgwọ 20% VAT na £50.
Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ ala karịrị afọ 30 na emezibeghị ya nke ukwuu, a ga-ana gị naanị 5% VAT.
You na-alaghachi azụ dị ka onye na-ebufe onye bi na United Kingdom? Ọ bụrụ n'inwere ụgbọ ala ahụ ihe karịrị ọnwa isii ma nwee ihe akaebe nke ibi na Australia na-agbatịghachi ọnwa 12 - mgbe ahụ mbubata gị ga-abanyekarị n'ọtụtụ ọrụ na ụtụ isi.
Maka ụgbọ ala ndị na-erubeghị afọ iri, mgbe ị bịarutere UK, ụgbọ ala gị ga-achọ irube isi n'ụdị nkwado UK.
Anyị na-eme nke a site na iji ule IVA. Anyị nwere naanị ụlọ nyocha IVA na-arụ ọrụ na nzuzo na UK, nke pụtara na ụgbọ ala gị agaghị echere oghere nnwale na ebe nnwale gọọmentị, nke nwere ike were izu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọnwa iji nweta. Anyị na-anwale IVA kwa izu na saịtị wee nwee ntụgharị ọsọ ọsọ iji nweta ụgbọ ala gị debanyere aha na n'okporo ụzọ UK.
Ụgbọ ala ọ bụla dị iche na ndị nrụpụta ọ bụla nwere ụkpụrụ nkwado dị iche iche maka inyere ndị ahịa ha aka site na usoro mbubata, yabụ biko nweta ntinye akwụkwọ ka anyị nwee ike kparịta oke ọsọ na ọnụ ahịa nhọrọ maka ọnọdụ gị.
Carsgbọ ala Ọstrelia nwere ike ịchọ ngbanwe ụfọdụ, gụnyere speedo iji gosipụta ịgụ MPH na ngbanye ọkụ ọkụ azụ ma ọ bụrụ na ọ kwadobeghi nke ọma.
Anyị arụwo nnukwu katalọgụ nke ihe na ụdị ụgbọ ala anyị webatara wee nwee ike inye gị atụmatụ ziri ezi nke ihe ụgbọ ala gị ga-achọ ka ị dịrị njikere maka ule IVA ya.
Ụgbọ ala karịrị afọ 10 bụ ụdị nnabata a gụpụrụ mana ọ ka na-achọ ule nchekwa, nke a na-akpọ MOT, na mgbanwe ndị yiri ya na ule IVA tupu ndebanye aha. Mgbanwe ndị a na-adabere na afọ mana ọ na-abụkarị n'ọkụ azụ.
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị karịrị afọ 40 ọ chọghị nnwale MOT ma enwere ike ibunye ya ozugbo na adreesị UK tupu edebanye aha ya.
Ị bụ onye bi na Australia na-ebufe?
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-ekpebi ibughachi ụgbọ ala ha site n'Australia na-eji ohere mkpali na-enweghị ụtụ isi enyere mgbe ha na-akwaga ebe ọzọ.
Anyị nwere ike inyere aka ilekọta ụgbọ ala ebe ị nọ na-agagharị. Y’oburu n’ichoro ibupu ihe nke aka gi na ugbo ala gi n’ime otu akpa anyi no na aka ichikota ugbo ala n’aha gi.
Site na onye raara onwe ya nye n'ụlọ ọkachamara TOR, anyị nwere ike inye aka na ngwa gị maka ịnyefe obibi ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla.
Ichegbu onwe gị banyere idebanye aha ụgbọ gị bụ ihe anyị chọrọ ịbụ usoro dị mfe maka gị. Egbula oge ịjụ gị ajụjụ ọ bụla gbasara usoro TOR.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara enyemaka nfefe nke ebe obibi lelee njikọ dị n'okpuru!
Nyefee nke obibi